Guddiga doorashada dadban ee heer Puntland oo ku dhawaaqay wakhtiga la qabanayo codaynta xubnaha aqalka hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddiga doorashada dadban ee heer Puntland oo ku dhawaaqay wakhtiga la qabanayo codaynta xubnaha aqalka hoose
October 31, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer Puntland Khaliif Aw-cali. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga doorashada dadban ee heer Puntland ayaa maanta oo Isniin ah caasimada Puntland ee Garoowe kaga dhawaaqay wakhtiga ay bilaabmi doonto cod bixinta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland Khaliif Aw-cali oo saxaafada maxaliga ah kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in 5-ta bisha November ay bilaabmi doonto cod bixinta.
“Bisha November 2-deeda ilaa 4-ta waxaa socon doonaa dejinta diiwangalinta iyo sawiradda ergada codka bixinaysa…. Ergay kasta waxaa la siinayaa kaar aqoonsi ah… 5-ta ilaa 6-da bisha November waxaa socon doonta codaynta aqalka hoose….. 7-da November waxaa soo bixi doona 12-ka Xildhibaan” ayuu yiri guddoomiye Khaliif Aw-cali.
Khaliif Aw-cali ayaa fariin u diray isimada iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada iyo musharaxiinta xildhibaanada federaalka, isagoo ugu baaqay in ay soo gudbiyaan ergooyinka dooranaya xubnaha xildhibaanada ayna soo waafajiyaan qoondada loo asteeyay haweenka ee ergooyinka iyo musharaxiinta aqalka sare.
December 10, 2016 Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha DFS oo loo doortay aqalka hoose iyadoo guddiga doorashooyinka ay horey ugu diideen ka qeybgalka doorashada
Wasiirka amniga DFS oo sheegay in ay qabteen kooxo looga shaki qabo Al-Shabaab oo doonayay in ay ka dhoofaan garoomada dalka
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa cunoqbatayn ku soo rogay ganacsade Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu taageero kooxda ISIS ee ku sugan Puntland, Soomaaliya. Bayaan ay soo saartay Waaxda Hanti-dhowrka Mareykanka Jimcadii, ayay ku sheegtay [...]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa manta oo Sabti ah magacaabay qaar katirsan golihiisa wasiiradda. Laftagareen ayaa horaantii bishii December ee sanadkii 2018 loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed kadib [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa sheegtay in sideed qodob meelmarintoodu ay muhiim tahahy si horey loogu sii socdo oo xal looga gaaro doorashooyinka Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada subaxnimadii hore ee Arbacada. [...]